ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ရထားသွားလာကြဘူး? မီးရထားခရီးသွားလာလျှော့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်, လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် ကမ်းလှမ်းမှုသည်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများရိုးရှင်းစွာမကိုက်ညီနိုင်မယ့်လူမှုရေးရှုထောင့်. သို့သျောလညျး, မသန်စွမ်းခရီးသွားအချို့မှစိတ်ညစ်စရာရှိနိုင်ပါသည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပျော်စရာကိုမပျော်နိုင်ဟုမဆိုလိုပါ, သော်လည်း. ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချို့အခြေခံဒေသများကမ်းလှမ်း စီစဉ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်ရဲ့ ရထားခရီးစဉ် ဒါကြောင့်ဥရောပတစ်မသန်စွမ်းတွေနဲ့ခရီးသွားလာလျော့နည်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်.
သင်သည်မသန်စွမ်းမှုဖြင့်ခရီးသွားနေပါက Save-A-Train ကိုမည်သည့်ရထားဖြင့်သွားမည်နည်း?
အထူးမသန်မစွမ်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူခရီးသွားတဦးတည်းဒေသကနေအခြားမှကွဲပြားစေခြင်းငှါ, အများအပြားစံပေါ်မူတည်။; သင့်ရဲ့အထူးရထားပေါ်တွင်ကားများ, အမျိုးမျိုးသောမှာအဆောက်အ ဘူတာ သင့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်, သုံးစွဲနိုင်မှုအတွက်တောင်မှသင်၏လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်လစီ.
သင်၏လက်မှတ်နှင့်ခရီးစဉ်ကိုသင်လက်ခံရရှိသည်နှင့်သေချာစွာစစ်ဆေးပါ. သင်သည်သင်၏အမျိုးမျိုးသောရပ်နားမှာအံ့သြမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဒါကြောင့်သင်သည်၎င်း၏မူဝါဒများနှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းသေချာ (ရေခြားမြေခြားခရီးသွားအထူးသဖြင့်လာသောအခါ).
မြို့အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်အစိတ်အပိုင်းများနေ. ဤသည်သည်မသန်စွမ်းမှုဖြင့်ခရီးသွားနေစဉ်သင်၏ရထားခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်တစ်ဦးအကြီးအလက်လှမ်းဟိုတယ်တွေ့ပြီစေခြင်းငှါ, သငျသညျလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသင်မူကားအိမ်ရှေ့တံခါးမှထွက်လှိမ့် / အဘယ်အရာကိုတွေ့လိမ့်မည်? အားလုံးလမ်းညွန်အတွက်တောင်ကုန်းများနှင့်လှေကားရှိပါသလား? သငျသညျ cobblestones ကျော်လှိမ့်မှရပါလိမ့်မယ်? လက်လှမ်းစားသောက်ဆိုင်အနီးအနားမှာရှိပါသလား? ဟိုတယ်ရပ်ကွက်အတွင်းသုတေသနအရေးပါဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် Google Maps ကို Street View ပွညျသူပွညျသား Lay ရဖို့, ထို့နောက်သင့်မေးခွန်းများကိုအတူဟိုတယ်အီးမေးလ်ပို့.
မင်းရထားလက်မှတ်တွေကိုမင်းအမှာယူနိုင်ပါတယ် ဥရောပတိုက်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးရထား အပေါ် Save-A-ရထား နီးပါးတိုင်းဦးတည်ရာကိုအတွက်အထက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်3မိနစ်များ, မှာ စျေးအသက်သာဆုံးမီးရထားလက်မှတ်ခနှုန်းထားများ နှင့် obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစိတ်သက်သာရာရ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့?, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)